सागका स्वर्णधारीलाई कांग्रेसद्धारा सम्मान - Lokpath Lokpath
२०७७, १६ श्रावण शुक्रबार १९:१९
सागका स्वर्णधारीलाई कांग्रेसद्धारा सम्मान
प्रकाशित मिति : २०७७, १६ श्रावण शुक्रबार १९:१९
काठमाडौं । १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद सागमा स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडीहरुलाई नेपाली कांग्रेसले सम्मान गरेको छ ।
पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित एक कार्यक्रममा कांग्रेसले स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीहरुलाई नगदसहित सम्मान गरेको हो । कांग्रेस खेलकुद विभागले आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा सभापति शेरबहदुर देउवाले स्वर्ण पदक विजेताहरुलाई प्रतिखेलाडी १० हजारका दरले सम्मान गरेको हो । एकभन्दा बढी पदक जित्ने खेलाडीहरुलाई थप ५ हजार दिइएको छ ।
जसअनुसार सागमा ४ वटा स्वर्ण जित्ने पौडीकी गौरिका सिंहले २५ हजार प्राप्त गरिन् । यस्तै २ वटा पदक जित्ने तेक्वान्दोका आयशा शाक्य, करातेका मन्डेकाजी श्रेष्ठ र गल्फका सुबास तामाङलाई १५ हजार रुपैयाँले सम्मान गरेको छ ।
नेपालले सागमा स्वर्ण रजत र कास्य गरी २ सय ६ पदक प्राप्त गरेपनि कांग्रेसले स्वर्ण पदक विजेतालाई मात्रै सम्मान गरेको हो । यद्यपी रजत र कास्य जित्ने खेलाडीलाई भने पछि सम्मान गर्ने विभागले जनाएको छ । सागमा नेपालले ५१ स्वर्ण, ६० रजत र ९५ कास्य सहित कुद पदक २०६ जितेको थियो । महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा गठन भएको पार्टीको खेलकुद विभागले सक्रियता देखाउन थालेको छ ।
काठमाडौं । अष्ट्रेलिया र वेस्ट इन्डिजबीचको टी-ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज स्थगित भएको छ ।
काठमाडौं । इंग्लिस प्रिमियर लिगमा बढुवाका लागि आज (मंगलबार) च्याम्पियनसिपको प्ले अफ खेल
जब रिङ्गमा कोब्रा र अजिङ्गर लिएर छिरे रेस्लर….
काठमाडौं । डब्ल्यूडब्ल्यूईमा सयौँ रेसलर्स आफ्नो दाउ र स्टाइलको कारण चर्चामा रहन्छन् ।
रोनाल्डोले किने संसारकै सबैभन्दा महंगो कार, मूल्य सुन्दा पर्नु हुनेछ चकित !
काठमाडौं । पोर्चुगलका फुटबलर क्रिस्टियानो रोनाल्डोले विश्वकै महंगो कार बुगाटी ला वाओएभर किनेका